Tsy Ny Disadisa Siriana No Hakàn’izy Ireo Amiko Ny Noeliko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2016 3:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Français, русский, polski, 日本語, українська, عربي
Fanamarihana: Lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy nivoaka ny 22 Desambra 2015
Noely tao Siria. SARY: Charles Roffey, nozaraina tao amin'ny Flickr,nampiasàna ny CC BY-NC-SA 2.0
Ampahany amin'ireo andian-dahatsoratra manokana avy amin'ilay bilaogera sady mpikatroka, Marcell Shehwaro, ity lahatsoratra ity, manoritsoritra ny zavamisy iainana ao Siria mandritry ny ady mitam-piadiana mitohy ifanaovan'ny tafika miara-dia amin'ny fitondràna amin'izao fotoana izao sy ireo mikatsaka ny hanongana azy.
Nanana dikany lehibe ho an'ny fianakaviako ny Noely, feno fombafomba ara-panahy sy ara-pianakaviana. Fony mbola ankizy, nahazatra ahy sy Leila anabaviko ny mifandimby tsy matory rehefa alina mba hitsikilo an'i Santa Claus (Dadabe Noely), miandry hanatratra azy ‘amperinasa’. Tsy tsaroako tsara ny fotoana nahatsapako fa hay fitapitaka fotsiny lalaovin'ny ray aman-dreny ilay izy, na ny fotoana nahitànay ny taratasy rehetra nalefanay ho azy, nosoratana nandritry ny taona maro, nafenin'ny ray aman-dreninay tsara. Na dia efa nitombo sy nahalala aza fa tsy misy i Santa, nisisika ihany ny reniko ny amin'ny hoe fomba fanao isan-taona ny fifanolorana fanomezana ery ambanin'ny hazo. Fomba izay niato, mazava ho azy, nony nodimandry izy.
Any ampiandohan'ny Desambra, fahazarany ny manontany anay tsirairay ny zavatra tadiavinay, ny zavatra irinay, ary ataony izay hahazoana antoka fa hividy fanomezana ho an'ny hafa izahay tsirairay avy. Laninay amin'ny fifanolorana fanomezana sy taratsy ny marainan'ny Noely, aorian'izay aho mandany ora maro dia maro hiomanana. Ny fikarakaràna volo, ny ankosotra, ny akanjo vaovao. Mividy akanjo vaovao aho—“Akanjo Noely”—isantaona mandrapahatongako tamin'ny faha-28 taona. Narevaka hatrany aho isaky ny Noely. Tsy toy ny mahazatra, fa vita voatra tsara ny voloko. Nahazatra ahy ny nanandrana manjamaso isankarazany tamin'ny hodimasoko. Mazàna aho no mandeha lavidavitra kokoa ka manao tombokavatsa sary lolo eo amin'ny soroko—“Noely ny andro!” Avy eo mandeha mamonjy lamesa, arahana fety kely izay isehoan'i Santa sy izaràny aminay balaonina sy satroka, dia nandihy tamin'ny “Jingle Bells” izahay.
Rehefa nodimandry i dadanay dia marobe ireo fomba Noely no nanjavona koa tao an-tranonay. Nanjavona ny hazonoely, ohatra, saingy notazonin'ny reniko ireo fombafombam-pitiavana sy fifanolorana fanomezana, hatramin'ny fisisihany isantaona amin'ny handehananay mivoaka mankalaza miaraka amin'ireo namanay, dia izy irery no avela eo. Ankehitrny, malahelo isanandro ireny fotoana namelàna azy ho irery ireny aho, fony tanora, mba handehanana mivoaka hankalaza miaraka amin'ny nàmana.
Taorian'ny nandehanan'ny anabaviko nanorin-tokantrano sy ny niterahany ny zanany voalohany, niverina nahazo ilay endriny teo anivon'ny fianakaviana ny Noely ary niverina nitsiky ny reniko. Niverina niainana ilay fombafomba fanaingoana hazonoely ary niaraka nankalaza tamin'ireo zafikeliny izy. Nitombo ny isan'ireo taratasy ho an'i Santa ary lasa nahay namorona daholo izahay rehetra tamin'ny famoronana endri-javatra vaovao ho an'ny fisehoan'i Santa sy ny fizaràna ireo fanomezana.
Avy eo nanomboka ny revolisiona.
Tsotra araka izay azo natao ny Noely. Ezahako ny minia tsy mahalala ireo raho-mitatao ka hanana Noelim-pianakaviana tsotra, miezaka manao izay manamaivana ny tahotr'i neny sy ny tsodranony mba tsy ho azon-tsampona aho.
Ny taona nanaraka an'io, sarotra ny tsy hiraharaha izany rehetra izany. Ny andron'ny Taombaovao no ilay androko farany tao an-tranonay. Efa voatilin'ny mpitandro filaminana sahady aho noho ny zavatra nosoratako, ary ny momba ahy nosoratan'ireo olona —izay olona mpiaraka mankalaza ny Noely tamiko ihany, mpiaraka mihira, nandihy sy nankalaza — nalefany ho an'ny mpitandro filaminana.
Izay andro izay no androko farany tany amin'ny ilany andrefan'i Aleppo izay, hatramin'ny anio, mbola eo ambany fifehezan'i Assad, mahatonga ny tsy fahafahako mankany. Namakivaky ny sisintany mankao Tirkia aho ary avy eo no niditra avy amin'ny ampahany afaka amin'ny tanàna. Mba hahafahana manao ilay fiampitàn'ireo faritra roa ireo dia tsy maintsy nampiasa taratasy sandoka aho ary manova endrika misaron-doha. Ary mba hialàna amin'ny tifitr'ireo mpitily avy amin'ny fitondràna izay mikendry ireo mpiampita, tsy maintsy nihazakazaka izahay rehefa miampita eo anelanelan'ireo toerana roa ireo. Ireo no dimy minitra faran'izay mampididoza indrindra. Fiampitàna, tsy misy tanjona dia mendrika hanaozavana io sorona io afa-tsy ny hoe “ny fahatsiarovana ny Taona Vaovao”. Noely atao toy ny hetsika fanoherana—tsy ho avelako ho esorin'izy ireo amiko ny Noeliko.
Ny taona nanaraka an'io dia manaraka izay misy ahy ny ISIS. Tena faran'izay zavadoza ho ahy, amin'ny maha-Kristiana, ny fisiako any aminà faritra iray izay iriariavan-dry zareo malalaka, hakàny an-keriny ireo revolisionera, ka ny Miozolmana no voalohany amin'izany. Nefa na eo aza ny loza, nisisika tamin'ny hametrahana hazonoely tao an-tranoko aho. Nandritry ny fotoanan'ny ady, tsy nisy toerana nahafahanao nividy an-kalalahana hazonoely izany.
Nieren-doza ka tafita teny amin'ny ilany iray aho: “Zavamahagaga iray tamin'ny Noely”, angamba. Ary nankalaza ny Noely sy Taona Vaovao niaraka tamin'ireo namako tia ahy ka nandray risika mihitsy aza niaraka nankalaza izany tamiko. Avy ao aho no niverina tany amin'ny faritra afaka tao Aleppo, nitsidika farany ny tranoko, ireo arabe tao sy ny Noely araka izay nahafantarako azy.
Nandritra izay fotoana izay, io taona io ihany, dia nisy zavamahagaga hafa iray niseho tao an-tanànako: nivoaka velona tamin'ny daroka baomba tao aminà fety iray fankalazana ny taona vaovao ireo namako. Tena mbola velom-pisaorana noho izany aho. Ny zavamahagaga tsara indrindra teo amin'ny fiainako.
Ny taona nanaraka an'io dia manaraka izay misy ahy ny ISIS. Tena faran'izay zavadoza ho ahy, amin'ny maha-Kristiana, ny fisiako any aminà faritra iray izay iriariavan-dry zareo malalaka, hakàny an-keriny ireo revolisionera, ka ny Miozolmana no voalohany amin'izany. Nefa na eo aza ny loza ,nisisika tamin'ny hametrahana hazonoely tao an-tranoko aho. Nandritry ny fotoanan'ny ady, tsy nisy toerana nahafahanao nividy an-kalalahana hazonoely izany. Tany Tiorkia aho no tsy maintsy nividy, tamin'ny vidiny izay zara raha takatro aza. Nofonosiko tany anaty akanjo tany ireo kasinga rehetra taminy ary nentiko an-tsokosoko teny an-dàlana nankany Aleppo. Nafeniko tany anaty boatin-tsalàka ireo ravaka. Ora roa teny an-dàlana izay nodiako, tsy rototra isaky ny mandalo toerana fanamarinana mba tsy hisian'ny fisavàna ny akanjoko sy tsy hahitàna ilay hazo nentiko an-tsokosoko.
Nanontany ahy ny mpiambina iray teo amin'ny toerana fisavàn'ny ISIS: “Ho an'iza ity valizy ity?”
Ahy io. Saiky handeha hamoha azy aho no namaly ilay mpamily hoe: “An'ilay ramatoa ito.”
Tsy nahaliana ilay mpiambina intsony ny hisava azy, ary dia nizotra am-pilaminana aho nankany Aleppo. Zavamahaga iray hafa ve? Tsy fantatro.
Nangoniko nanodidina ahy ireo namako. Sambany vao mba nandravaka hazonoely ny ankamaroan'izy ireo, ary tsy manana heviny ara-panahy ho azy ireo aza ilay fombafomba, tonga sy nijanona niaraka tamiko mba hifampizara ny hafaliako ry zareo.
Jawad, ilay mahatsikaiky indrindra tamin'izy ireo, niteny tamim-piravoravoana hoe: “Tena tsara mihitsy ny fety Kristiana an.” Dia nihomehy izahay rehetra.
Ali, ilay namako ao amin'ny Tafika Siriana Malalaka, nanatona nitondra fanomezana tiany hapetrako ery ambanin'ilay hazo. Nalaiko iny—nivarahontsan'ny tahotra aho. Basikely mahafaty ilay izy. Hoy izy: “Tsinontsinona iny. Raha sanatria fotsiny tratran-dry zareo ianao,”—ny ISIS no tiany ambara– “aza avela hahazo anao velona ry zareo.”
Nampangorintsina ahy ilay hevitra. Nampangorintsina satria hoe olona fitiavan'olona iray anao no anolorany hevitra hamonoana tena. Fantany fa tsy hahavita hamono aho, araka izany dia tsy niezaka ny nandresy lahatra ahy hiaro ny tenako izy. Nety ho basy halatra mihitsy aza ilay izy, miaraka amin'ilay solosaina finday sy ny zavatra hafa tao anatin'ilay trano, ary tsy nilainay velively ny nampiasa azy. Zavamahagaga, indray.
Androany dia mihidy ao anatin'ny trano iray ao amin'ny manodidina an'i Al Sukkari ilay hazo; trano iray nofefen'ny tompony tamin'ny biriky talohan'ny nandosirany tsy fantatray hoe ho aiza.
Angamba izany rehetra izany no antom-pisian'ny Noely.
Miaina tsotra miaraka amin'ireo olona tianao, mankahatra ny fahafatesana sy ny maha-manirery.
Tsy fijerena ny hoe tena ireo ray sy reninao ihany no Santa Claus raha ny marina.
Mankahatra ny mety hitifiran'ireo mpitily anao mba hahafahanao mandia ny alina mialoha ny Taona vaovao miaraka amin'ny namana.
Mampiditra an-tsokosoko hazonoely mitety ireo toerana fisavàn'ny ISIS.
Mametraka tanjona ho an'ny Taona Vaovao, na efa fantatra aza fa tsy ho vitanao ny hanatratra azy ireny.
Ny mivavaka amin'ny fo mba tsy hikatona amin'ireo mpitsoaponenana avy any amin'ny firenenao ny varavarana, tahaka izay nikatonany ho an'i Maria sy Josefa tamin'ny alina mialoha ny Noely.
Ny miezaka sy mikaroka fomba mahagaga mba hidirana aminà fahatsiarovana iray mangirifiry ary mandoko fitiavana eo aminy.
Angamba izany rehetra izany no antom-pisian'ny Noely. Maneho tsy fahamatorana mba hanoratra taratasy iray hirariana “fahalalahana”.